Lesona Momba ny Fandraisam-bahiny sy ny Vavaka | Fiainan’i Jesosy
Lesona Momba ny Fandraisam-bahiny sy ny Vavaka
NITSIDIKA AN’I MARTA SY MARIA I JESOSY
ILAINA NY FIKIRIZANA REHEFA MIVAVAKA
Tamin’ny ilany atsinanan’ny Tendrombohitra Oliva no misy an’i Betania, ary roa kilaometatra teo ho eo avy teo Jerosalema. (Jaona 11:18) Nankany i Jesosy ary nandalo tao an-tranon’i Marta sy Maria rahavaviny. Naman’i Jesosy izy roa vavy sy i Lazarosy anadahiny, ka nandray tsara azy.
Voninahitra lehibe ny mandray ny Mesia. Tena te hikarakara tsara an’i Jesosy i Marta, ka nanomboka nanao sakafo be. Nikenonkenona teo izy, fa i Maria kosa nipetraka teo an-tongotr’i Jesosy sy nihaino azy. Hoy i Marta avy eo: “Tompo ô, tsy mampaninona anao ve ny hamelan’ny rahavaviko ahy hanao raharaha irery toy izao? Koa mba asaivo manampy ahy izy.”—Lioka 10:40.
Tsy nanakiana an’i Maria i Jesosy. Notoroany hevitra kosa i Marta satria revo tamin’ny sakafo. Hoy izy: “Marta a! Marta a! Maro ahina sy sahiran-tsaina amin-javatra maro ianao. Zavatra vitsivitsy ihany anefa no ilaina, eny, iray monja aza. Fa i Maria kosa nifidy ny tsara kokoa, ka tsy halaina aminy izany.” (Lioka 10:41, 42) Te hilaza i Jesosy fa tsy ilaina ny mandany fotoana hanaovana sakafo be. Sakafo tsotsotra iray dia ampy.
Tsara sitrapo i Marta satria te handray tsara ny vahininy. Repotra nikarakara sakafo anefa izy, ka tsy nandray ny fampianarana sarobidy avy tamin’ny Zanak’Andriamanitra. Nasongadin’i Jesosy fa nanao safidy tsara i Maria. Hitondra soa maharitra ho azy izany sady andraisantsika lesona.
Nilaza zava-dehibe hafa koa i Jesosy, indray mandeha. Hoy ny mpianatra iray: “Tompo ô, mba ampianaro mivavaka izahay, tahaka ny nampianaran’i Jaona ny mpianany.” (Lioka 11:1) Efa nanao izany i Jesosy herintaona sy tapany teo ho eo talohan’izay, tamin’ny Toriteny teo An-tendrombohitra. (Matio 6:9-13) Tsy teo angamba io mpianatra io tamin’izay, ka naverin’i Jesosy ireo hevi-dehibe. Nilaza fanoharana izy avy eo mba hahitana fa ilaina ny fikirizana rehefa mivavaka.
Hoy izy: “Iza aminareo moa no mana-namana, ary hankany aminy amin’ny misasakalina, ka hanao hoe: ‘Mba ampisambory mofo telo aho, ry sakaiza, fa misy namako tonga ao amiko avy tany amin’ny nalehany, nefa tsy manana haroso azy aho’? Ary mamaly ilay ao an-trano hoe: ‘Aza helingelenina intsony aho, fa efa mihidy ny varavarana. Sady efa eto amiko eto am-pandriana ny zanako kely, ka tsy afa-mitsangana hanome zavatra anao aho.’ Lazaiko aminareo fa na tsy hitsangana hanome zavatra azy noho ny fisakaizana aza izy, dia hitsangana ihany ka hanome izay ilainy, noho ny fikirizany sy ny fahasahiany.”—Lioka 11:5-8.
Tsy te hilaza i Jesosy hoe tsy vonona hanome izay angatahin’ny olona i Jehovah, toy ilay olona tao amin’ny fanoharana. Tiany haseho kosa hoe raha ny olona malaina hanome aza manome ihany rehefa misisika mangataka ny namany, mainka moa fa ilay Raintsika be fitiavana any an-danitra! Azo antoka fa hamaly ny vavaka vokatry ny fo ataon’ny mpanompony tsy mivadika izy. Hoy i Jesosy avy eo: “Hoy aho aminareo: Mangataha foana dia homena ianareo, mitadiava foana dia hahita ianareo, dondòny foana dia hovohana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay rehetra mitady no mahita, ary izay rehetra mandondòna no hovohana.”—Lioka 11:9, 10.
Nohamafisin’i Jesosy avy eo ny heviny. Nampitahainy tamin’ny ray olombelona i Jehovah ka hoy izy: “Ray iza eo aminareo moa no angatahan-janany trondro, kanefa hanolotra azy bibilava fa tsy trondro? Na angatahan-janany atody ka hanolotra azy maingoka? Koa raha ianareo, na dia ratsy fanahy aza, mahalala hanome zava-tsoa ho an’ny zanakareo, mainka fa ilay Ray any an-danitra! Hanome ny fanahy masina ho an’izay mangataka aminy tokoa izy!” (Lioka 11:11-13) Manome toky izany fa vonona hihaino antsika sy hanome izay ilaintsika ilay Raintsika.
Inona no nifantohan’i Marta sy Maria ka tsy nampitovy azy ireo? Inona no ianarantsika avy amin’izany?
Nahoana i Jesosy no namerina nampianatra momba ny vavaka?
Inona no fanoharana nolazain’i Jesosy mba hampisehoana fa ilaina ny fikirizana rehefa mivavaka?
Hizara Hizara Lesona Momba ny Fandraisam-bahiny sy ny Vavaka